I-Kuwait Airways imisa zonke iinqwelomoya eziya eBeirut ngaphezulu "kwezilumkiso zokhuselo"
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Kuwait Airways imisa zonke iinqwelomoya eziya eBeirut ngaphezulu “kwezilumkiso zokhuselo”
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zeKuwait Breaking • Iindaba zaseLebhanon zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
I-Kuwait Airways imisa zonke iinqwelomoya eziya eBeirut ngaphezulu “kwezilumkiso zokhuselo”
I-Kuwait Airways, umphathi wesizwe welizwe, ubhengeze ukuba iyakuyeka zonke iinqwelomoya eziya eBeirut ukuqala ngoLwesine. Isigqibo senziwe ngenxa yesilumkiso sezokhuseleko esivela kurhulumente waseCyprus, utshilo.
Inkampani ibhengeze kuTwitter ukuba ithathe isigqibo sokumisa zonke iinqwelomoya eziya eLebhanon "ngesiseko sezilumkiso ezikhuselekileyo," yongeza ukuba ijolise "ekugcineni ukhuseleko" lwabakhweli bayo.
I-Kuwait Airways ayisayi kubhabha iye eBeirut ukuqala nge-12 ka-Epreli, utshilo inkampani. Akukacaci ukuba ukumiswa kuya kuthatha ixesha elingakanani, inkampani ithi zonke iinqwelomoya ziya kupheliswa "kude kube sisaziso."
Isilumkiso esivela kumagunya aseCyprus, apho le nkampani yasebenza khona, yeza ngosuku emva kokuba i-European Aviation Safety Agency (i-EASA) ikhuphe isilumkiso esifanayo nge-Eurocontrol, isilumkiso malunga “nogwayimbo lomoya oluya eSyria ngenqwelomoya kunye / okanye ngenqanawa. Imijukujelwa kwisithuba seeyure ezingama-72 ezizayo, kunye nokwenzeka kokuphazamiseka kwezixhobo zokuhambisa inqanawa kwirediyo. ” Isilumkiso silumkise abaqhubi beenqwelo moya malunga nomngcipheko wokuhamba ngenqwelomoya, ngakumbi kwimpuma yeMeditera nakwindawo yenqwelomoya yeNicosia. INicosia sesona sixeko sikhulu kunye nekomkhulu laseCyprus.
I-US, i-UK kunye ne-France bezikhe zabamba iingxoxo malunga nokuphendula kwezomkhosi kurhulumente wase-Syria uhlaselo lwekhemikhali eDouma ngezithintelo ze-chlorine ngo-Epreli 7.
I-Telegraph ixele ngolwe-Lwesithathu ukuba u-Nkulumbuso wase-Bhritane u-Theresa May sele eyalile i-submarine yase-Bhritane ukuba ihambe ngaphakathi ku-Syria, koko kubonwa njengokulungiselela inyathelo lomkhosi elisondeleyo. I-Bhritane ingaphehlelela imijukujelwa yayo kwangolwesine ebusuku emva kwentlanganiso yekhabhinethi, apho uMeyi kulindeleke ukuba afune imvume yabaphathiswa. Umongameli wase-US uDonald Trump ukwabonakalise ukuba uqhankqalazo lusemsebenzini, echaza ngolwesiThathu u-Twitter ukuba "imijukujelwa emitsha, emitsha kwaye 'ehlakaniphile" sele iza kubhabha eSyria.